Ukuhlala kabusha ngokutshalwa kwezimali eMalta naseGolden Visa
● Ukuhlala kabusha ngokutshala imali eMalta ngokutshala imali ku-real estate
Khipha ku-internet Abameli Bokuhlala Ngokutshalwa Kwezimali eMalta kanye nabameli be Ukuhlala kabusha ngokutshalwa kwezimali eMalta kanye nabathengisi bezinhlelo zokuhlala kabusha eMalta basebenza ngokubambisana ekuvikeleni kwamakhasimende.
Ukuhlala kabusha ngabenzeli bezokutshalwa kwezimali eMalta kuhlinzeka ngezinsizakalo zokuhlala ngokutshalwa kwezimali eMalta, ukuhlala kabusha ngezinhlelo zokutshala imali eMalta, ukuhlala kabusha ngohlelo lokutshala imali eMalta, ukuhlala kabusha kwesibili ngokutshala imali eMalta, ukuhlala kabili ngokutshala imali eMalta, ubuzwe kanye nokuhlala ngokutshala imali eMalta , Ukuhlala unomphela ngokutshalwa kwezimali eMalta, ukuhlala okwesikhashana ngokutshalwa kwemali eMalta, ukuhlala kabusha ngohlelo lokutshala imali eMalta, ukuhlala kabusha ngezinhlelo zokutshala imali eMalta, Ubuzwe ngokutshalwa kwezimali eMalta, Ubuzwe ngezinhlelo zokutshala imali eMalta, Ubuzwe ngohlelo lokutshala imali eMalta, okwesibili Ubuzwe ngokutshalwa kwezimali eMalta, ubuzwe obubili ngokutshalwa kwezimali eMalta, ukuhlala nobuzwe ngokutshala imali eMalta, ukuhlala kanye nokuba yisakhamuzi ngokutshala imali eMalta, izinhlelo zezomnotho zobuzwe eMalta, Ubuzwe ngohlelo lokutshala imali eMalta, Ubuzwe ngezinhlelo zokutshala imali eMalta, okwesibili ipasipoti eMalta, izinhlelo zepasipoti zesibili eMalta, uhlelo lwesibili lwephasipoti ngiseMalta, ipasipoti yesibili eMalta, ukuhlala kanye nepasipoti yesibili eMalta, ipasipoti yesibili yezokuxhumana eMalta, ipasipoti yesibili ngokutshalwa kwezimali eMalta, ipasipoti yesibili yobuzwe eMalta, uhlelo lwesibili lwepasipoti eMalta, izinhlelo zepasipoti zesibili eMalta, i-visa yegolide eMalta, ama-visa egolide eMalta, izinhlelo ze-visa zegolide eMalta, uhlelo lwe-visa egolide eMalta, i-visa yesibili yegolide eMalta, uhlelo lwesibili lwe-visa egolide eMalta, ama-visa amabili egolide eMalta, ubuzwe kanye ne-visa yegolide eMalta, ukuhlala kanye ne-visa yegolide eMalta, isakhamuzi se-visa segolide eMalta, uhlelo lwe-visa egolide eMalta, izinhlelo ze-visa zegolide eMalta.
"Izixazululo ezi-1 zokuma" kwakho konke ukuhlala kwakho ngokutshala imali eMalta ngokuxhaswa okwengeziwe.
Ukutshalwa Kwezimali Okuncane eMalta ngokuhlala kabusha ngokutshalwa kwemali: EUR 290,000
Isingeniso iMalta nokuhlala kabusha ngotshalomali
Uma kwenzeka uyithanda indlela yokuphila, yomlando, kanye nesimo sezulu esimangalisayo uzokujabulela ukuhlala eMalta!
Isendaweni engamakhilomitha angaba ngu-50 eningizimu yeSicily eMedithera, iMalta iyisiqhingi esincane esiveza umoya waseMedithera, uhlaka lwezinsizakalo zezokwelapha ezisezingeni eliphakeme, kanye nabantu abakhuluma isiNgisi. IMalta ngokufanayo iyikhaya lengxenye yokugxuma okuhamba phambili emhlabeni futhi ibilokhu ithuthuka njengendawo yokuvakasha isikhathi esibonakala singapheli unyaka nonyaka.
Iziphikiso ezidumile eMalta zifaka idolobha eliyitheku elinenhlokodolobha nenhloko-dolobha yaseValletta — ikhaya lobunjiniyela obudala, indawo yezitolo ehamba phambili, ikakhulukazi izindawo zokudlela ezinkulu, kanye nenethiwekhi yomhlaba wonke.
Omunye othandwa kakhulu yi-expat yiSliema, khona kanye emanzini avela eValletta, lapho uzothola khona inqwaba yokukhethwa kwempahla esanda kwakhiwa. Ogwini olusenyakatho lwalesi siqhingi esiyisisekelo, indawo yokubhuka engasogwini ezungeze iSt.
Kulabo abathemba ukusuka kude nakho konke, isiqhingi esihle, esivamile esisenyakatho saseGozo sinikeza ukuhamba okuhamba kancane kwempilo; ububanzi bolwandle oluzolile babone izindlela zokuhambahamba; izigcawu zesifundazwe, iMedithera; nezinsimu zephunga elimnandi, i-thyme yasendle. Futhi, iGozo akuyona yonke into ehlelekile emvelweni. Kulabo abafuna ukuzwana phakathi kokuthula nokunethezeka, inhloko-dolobha yesiqhingi — iVictoria — iyindawo enhle enezitolo, izindawo zokudla, amahhovisi ezenhlalakahle, futhi kukuhle kakhulu noma yini ongayidinga.
Uma kwenzeka ungumuntu wase-Europhile ocabanga ukusebenzisa imali yokuthatha umhlalaphansi egcwele isiko nomlando ocebile we-Old World, kepha ubuhlungu bezinsuku ezifudumele ezilayishwe ngokukhanya okuhle kwemini, isibhakabhaka esiluhlaza, kanye nezidlo zangaphandle ezingasolwandle, ngaleso sikhathi cabanga ukushiya phansi eMalta, iziqhingi zeziqhingi eziningi ezisenkabeni yoLwandle iMedithera.
Kungamakhilomitha ayi-100 kuphela ukusuka ebhange laseSicily, iMalta yisizwe esincane kunazo zonke e-European Union, kepha inikeza ngokungangabazeki okungaphezu kobukhulu bayo obuncane obungasiphakamisa: amadolobha amahle ngokwedlulele ngokunethezeka ngakunye, inala yonyaka yokuzivocavoca kwezenhlalo kanye nokuhehayo , inethiwekhi enkulu yomhlaba wonke, nendlela yokuphila enengqondo, ebuyile. Ingxenye enhle kakhulu ukuthi yize sinesimo sezulu sezwekazi i-Europe, lesi siqhingi sikhuluma isiNgisi.
AbaseBrithani selokhu bahlukanisa iMalta njengendawo yodumo yomhlalaphansi, kepha abaseNyakatho Melika baqala ukuthola izintelezi zayo. Uma kwenzeka uke wezwa noma yini kulezi ziqhingi, mhlawumbe ujwayelene neValletta, inhlokodolobha eshaqisayo yaseMalta, imigwaqo yayo eyehlukile yobudala obuphakathi nemigwaqo emikhulu yamatshe asheshayo ikubuyisela emuva ngekhulu leshumi nesithupha.
Ukuhlala lapha kuyabiza
Ungakholelwa ukuthi ukuhlala esiqhingini esihle kakhulu saseMedithera esikhanyiswe ilanga kuyinto nje ecebile ngokukhethekile engayithwala. Akunjalo eMalta. Amarandi akho angaya kude ngendlela eshaqisayo. Abanye bashiye phansi ompompi bathi baphila kalula ngemali encane njenge- $ 2,600 — noma nangaphansi — njalo ngenyanga.
EMalta, ungathola ama-condos amakamelo amabili, okulula ukuhamba imizuzu engu-10 uzungeze ulwandle, ngoba kuncane njenge- $ 550 njalo ngenyanga. Ukuze uthole ikamelo elinamakamelo amabili elinendawo yokubona ulwandle, sethemba ukuthi uzosebenzisa noma imuphi umcimbi u- $ 1,100 njalo ngenyanga… okuyinto engeyinhle ngokucabanga ukuthi sixoxa ngombono waseMedithera. Izindleko zehla uma kwenzeka uthanda ukuhlala ezweni noma esiqhingini esincane saseGozo.
Izimpahla ezijwayelekile, ukudla ngaphandle, nezinye izindleko ezijwayelekile zibiza kakhulu kunalokho ongakucabanga. Ukwenza isibonelo, ungathola isidlo sakusihlwa esigcwele kahle sogu ngokuncane njenge- $ 23 umuntu ngamunye — kufaka phakathi ingilazi yewayini lomakhelwane. Ngokunjalo, uma kubhekwa ubukhulu besiqhingi nohlaka olubanzi (nolulinganiselwa ngokusobala) lwezinto zokuhamba, abanye bakudala bathinta impilo ngenjabulo ngaphandle kwezimoto, besindisa izinkulungwane ngezitolimende zezimoto, ukuvikela kanye nezindleko zecarport.
Inzuzo Yokukugcina Ujabule
Ngenkathi amaqiniso ekhombisa ukuthi lezi ziqhingi zaseMalta zineziqhingi ezintathu ezihlala abantu — esikhulu kunazo zonke (iMalta) ingamakhilomitha-skwele ayi-122 nje kuphela — uzobona ukuthi lezi ziqhingi zinikela ngokuvivinya umzimba okungapheli. Kukhona ngokuqhubekayo okuthile okwenzekayo.
Imvamisa, uLwandle iMedithera lunikeza ukuqondiswa kabusha okuningi, kusuka ekubhukudeni emanzini ayigugu aluhlaza okwesibhakabhaka kuya ekufafazeni kuzungezwe izimbobo ezivalekile, ukuya ekuhambeni ngezikebhe, ukugwedla, noma i-kayaking. Izithandani zomlando zizoba sezulwini, njengoba iziqhingi zinobukhulu obuvelele bezindawo eziyiqiniso kunanoma iyiphi indawo emhlabeni. Ungaqhubeka neminyaka uphenya ngamathempeli aseMegithithic aseGgantija, izinsalela zamaRoma, imikhuba yasendulo, izivikelo, izingadi, izindawo zokukhosela zeMpi Yezwe II, izindlu zokukhulekela ezinhle ezibabazekayo eziqhingini, bese usaqhubeka nokuthola izinto “ezintsha”.
Ngaleso sikhathi, kunemikhosi engakholeki yaseMalta. Unyaka wonke, abantu bachitheka bangena emigwaqweni bencoma imikhosi ekhanyayo, imibukiso, amadili, noma izinhlobo ezahlukene zokuzijabulisa. Njengesizwe samaKatolika, le mikhosi eminingi isenkolweni, kepha ngokufanayo uzothola ukuthi amadolobha amaningi aseMalta anomgubho ohlukile wawo (njengedolobha laseSt.Julian “iGostra,” lapho abantu bendawo zama ukuthuthela endaweni ephakeme kakhulu yomgodi ogcotshwe ngophawu ogcwala umsindo, kuyilapho izinkumbi zibajabulisa).
Isiqhingi ngokufanayo sinemicimbi eminingi yokuzijabulisa, ngokwesibonelo, iMalta Jazz Festival, i-International Fireworks Festival, ne-Notte Bianca —umkhosi lapho izikhungo zomlando nezindawo zasebukhosini zesiqhingi zivula khona iminyango yazo futhi zamukele izivakashi ezizobona imibukiso eyingqayizivele futhi imibukiso ubusuku bonke.
Umphakathi Womhlaba Wonke Othandekayo
Ngaphezu kokuthi unemisebenzi eminingi uma kwenzeka ushiya phansi umsebenzi eMalta, kodwa-ke, une-network enkulu futhi enamandla ekhuluma isiNgisi owayekwazi ukujabulela lezi zivivinyo. I-2011 Maltese Census ithole ukuthi ngaphezu kwe-6,000 ex-pats yaseBrithani ehlala eMalta, eceleni kwama-4,000 ase-Australia kanye nabacishe babe ngu-2,000 XNUMX baseCanada. Isigaxa esimemayo, lesi siqhingi sinemibuthano eminingi edidiyelwe ex-pats, evame ukutholela i-espresso ekuseni, iziphuzo zakusihlwa, nokudla kulo lonke idolobha. Ngokunjalo uzothola izinhlangano ngezenzo, ngokwesibonelo, iRamblers 'Club, amakilabhu ambalwa agijimayo, amakilabhu okugibela amahhashi, amakilabhu ezincwadi, futhi lokho kuyisiqalo nje.
Ukungena kulo lonke elaseYurophu
Uma kwenzeka ufuna ukusuka esiqhingini isikhathi esithile, okusele kweYurophu kungukuhamba okufushane nje kuphela — noma ukuhamba ngomkhumbi — kude. ISicily ihamba ngehora nesigamu ngesikebhe, kuyilapho iRoma ingeyona ihora ngokuhamba emoyeni. Imiphakathi esemadolobheni ebalulekile, ngokwesibonelo, iParis, iGeneva, ne-Athene ikakhulukazi ukuhamba kwamahora amabili kusuka eMalta's International Airport. Kokubili i-EasyJet neRyanair, ukusebenzisa indiza, ukuphatha iMalta, futhi ungathola uhambo lokuya ezweni ngezinga elincane njenge- $ 60.
Imininingwane eyisisekelo yokuhlala kabusha ngokutshalwa kwezimali kweMalta
Utshalomali oluncane lwe Ukuhlala kabusha ngokutshala imali eMalta
Ukuhlala kabusha ngokutshala imali eMalta
Icubungula isikhathi sokuhlala kabusha ngokutshalwa kweMalta
Izinketho Zokutshalwa Kwezimali ze Ukuhlala kabusha ngokutshalwa kweMalta
Kungani ufuna ukuhlala kabusha ngokutshalwa kweMalta
IMalta yindawo yezivakashi ethandwa kakhulu. Izwe futhi liyindawo enhle yezinhloso zokuphila. Njengelungu le-EU nendawo yaseSchengen, izwe linikeza izinzuzo eziningi kubahlali balo. Izinzuzo ezinkulu kakhulu ukuthi izakhamizi zezwe zingahamba ngokukhululeka kuyo yonke indawo yaseSchengen futhi zisebenzise amathuba okuhweba mahhala kuyo yonke indawo ye-EU. Ungathola kalula ukuhlala eMalta ngotshalomali. Uma uthola indawo yokuhlala uzokwazi ukuhlala eMalta, noma kunjalo ngeke udingeke ukuthi uhlale ezweni. Ukuhlala eMalta kuzokunikeza ilungelo lokusebenzisa izinzuzo zalo zentela kumholo wethu.
Izinzuzo zokuba ngumhlali waseMalta zingasetshenziswa kumalungu omndeni wakho kalula. Ngemuva kokuthi unikezwe ilungelo lokuhlala unomphela, amalungu omndeni wakho angaletha ifomu lesicelo sokuhlanganiswa komndeni. Isicelo singabhala oshade naye, izingane ezingakabi yi-18 okwamanje, izingane ezethembele kuwe nakuwe noma kubazali nogogo nomkhulu womlingani wakho.
Ukuhlala kabusha ngohlelo lokutshala imali eMalta insite
Ukuhlala eMalta kuzonikezwa wena ngesikhathi esifushane kakhulu. Isikhathi sokucubungula siyizinyanga eziyi-1-1.5 kuphela. Okokuqala kufanele ukhokhe imali eyi-EUR 5,500 kanye nesicelo sakho, esingabuyiswa. Ngemuva kokuthi isicelo sakho samukelwe, ungenza utshalomali oludingekayo. Lapho wenza utshalomali uzonikezwa imvume yokuhlala. Unesibopho sokuhambela eMalta kuphela ngokubhalisa idatha yakho yebhayomethrikhi. Nina malungu omndeni ningafaka isicelo semvume yokuhlala ngemuva kokuthola eyenu. Kufanele ubheke impahla yakho eMalta, kepha ukuhlala ezweni akuphoqelekile. Imvume yokuhlala ikhishwa iminyaka engu-5, kepha ingavuselelwa ngaso sonke isikhathi. Ngemuva kwesikhathi seminyaka emi-5 ungabuyisa imali oyitshalile.
Ukuze uthole ukuhlala eMalta ngokutshala imali kufanele uqedele lezi zinyathelo ezilandelayo.
Okokuqala kuzofanele utshale i-EUR 250,000 kumabhondi kahulumeni isikhathi esiyiminyaka emihlanu. Ngemuva kweminyaka emi-5 inani lakho olitshalile uzobuyiselwa kuwe. Uhulumeni waseMalta uqinisekisa ukuvikelwa kotshalomali lwakho.
Okwesibili, kuzofanele ukhokhe i-EUR 30,000 engabuyiswa, lapho kufanele kukhokhwe khona i-EUR 5,500 ekuqaleni kohlelo lwakho lokufaka isicelo.
Okwesithathu, kuzofanele uthenge noma uqashe impahla eMalta okufanele igcinwe inqobo nje uma ukuhlala kwakho kungakapheli. Uma ufuna ukuthenga ingcebo, ukuthenga kufanele kube okungenani ama-EUR 320,000 noma ama-EUR 270 kwezinye izindawo zaseMalta. Ngaphandle kwalokho, ungaqasha impahla nge-EUR 12,000 ubuncane noma kwezinye izindawo zaseMalta ngonyaka nge-EUR 10,000 ngonyaka.
Ukusekelwa kwamakhasimende ngokuhlala kabusha ngokutshala imali eMalta
Ithimba lethu le- Indawo yokuhlala ngama-Investment Agents eMalta futhi Indawo yokuhlala Ngokutshalwa Kwezezimali Abameli okweMalta inikeza amaklayenti nemindeni yawo eMalta ukwesekwa kobuzwe ngokutshalwa kwezimali okuvela eMalta, ukuhlala ngokutshalwa kwezimali okuvela eMalta namanye amathuba okutshalwa kwezimali kwamanye amazwe, emazweni e-37.
Sinikeza okungabizi Ukuhlala kabusha ngezinsizakalo zokutshala imali ngeMalta, ngokukhokhela kwethu okungabizi ifemu yomthetho wokutshalwa kwezimali kanye nowokufika OkweMalta, abambi bezimali abafudukela kwamanye amazwe abangabizi kakhulu eMalta, Indawo yokuhlala engabizi ngabacwaningi bezokutshalwa kwezimali eMalta, Indawo yokuhlala engabizi ngabameli bezokutshalwa kwezimali eMalta kanye nenkampani yabeluleki bokufuduka eMalta
Ukuhlala kabusha ngokutshalwa kwemali kusuka eMalta kuya emazweni angama-37.
Ukuhlala kabusha ngezinhlelo zokutshala imali ezivela eMalta.
Ukuhlala kabusha ngokutshalwa kweMalta ngeReal Estate
Sinikeza ukusekelwa kokutshalwa kwezindlu kwangempela eMalta ngombono wokuthi iklayenti kufanele lithole inzuzo enhle ekutshalweni kweMalta, noma kunini, lapho bafuna ukuphuma ekutshalweni okwenziwe yi-Residency yabo ngokutshala iMalta. Sinezibopho nabathuthukisi bezindawo ezimbalwa eMalta abanerekhodi elihle futhi impahla yabo isezindaweni ezinhle eMalta, ilanda izimbuyiselo ezinhle kakhulu.
Udinga ukwazi - Indawo yokuhlala yaseMalta ngo-Investment
Ukuhlala kabusha nguMmeli Wotshalomali eMalta kuzohlinzeka ngosizo lwemibhalo eningiliziwe ngokuhlala kwakho ngempumelelo ngokutshala imali eMalta. Izinsizakalo zethu ezijwayelekile zokuhlala ngokutshalwa kwemali eMalta zifaka:
Senza inkuthalo yokuqala efanelekile, ukulungiselela umbiko ngaphambi kokuncoma ukuhlala kabusha ngokutshala imali eMalta kumakhasimende ngokuthola imvume yokuhlala eMalta nokunciphisa ubungozi bokwenqaba.
Ukuze siqhubekele phambili ne-Residency yakho ngokufaka isicelo sokutshala imali eMalta sizodinga amakhophi askeniwe epasipoti yamakhasimende namalungu omndeni.
Ukuhumusha kanye ne-apostille yamadokhumenti Ukuhlala kabusha ngokufaka isicelo sokutshala imali eMalta. Abameli bethu abakhethekile be-Residency ngokutshala imali eMalta kanye ne-visa yegolide bazosiza ngokugcwalisa amafomu nemibhalo.
Lapho imibhalo yakho neyomndeni wakho yokuhlala ngokufaka isicelo sokutshala imali eMalta seyilungile, sizoyigcwalisa ngeziphathimandla ezifanele zaseMalta.
Lapho isicelo sakho sokuhlala kabusha ngokutshalwa kwezimali eMalta sesamukelwe, sihlanganyela izindaba ezinhle nawe bese siqala ukulungiselela ezinye izesekeli.
Asisekeli noma sihlinzeke ngokuhlala kabusha ngezinsizakalo zokutshala imali eMalta kubantu ababalulwe ngezansi noma amabhizinisi eMalta:
Indawo yokuhlala ngezinsizakalo zokutshala imali eMalta azinikelwa kubahwebi noma abasabalalisi bezingalo nezinhlamvu kusuka noma eMalta.
Indawo yokuhlala ngezinhlelo zokutshala imali eMalta ahlinzekelwa ukubhekwa kwezobuchwepheshe eMalta noma ubunhloli bezimboni bezinhlelo zokutshala imali ngaphakathi noma kusuka noma kuya eMalta.
Indawo yokuhlala ngokubonisana ngokutshalwa kwezimali eMalta ahlinzekwa nganoma yimiphi imisebenzi engekho emthethweni noma yobugebengu eMalta.
Indawo yokuhlala ngokusekelwa kotshalomali okweMalta akukhona okwabantu abasebenza ngezinto ze-Genetic eMalta.
Indawo yokuhlala ngezinsizakalo zokutshala imali eMalta akukhona okwamabhizinisi asebenza ngezikhali eziyingozi noma eziyingozi zebhayoloji noma izikhali zenuzi eMalta.
Indawo yokuhlala ngohlelo lokutshala imali ukusekelwa kweMalta akutholakali kubantu baseMalta abasebenza ngokuhweba, ukugcina eMalta, noma ukuthuthwa kwezitho zomuntu.
Indawo yokuhlala ngokutshala imali okweMalta akuyona eyezinkampani zokutholwa ezingekho emthethweni.
Indawo yokuhlala insiza yezinhlelo okweMalta akuzona ezezinkolo zezenkolo nezokusiza kwazo eMalta.
Indawo yokuhlala ngezinsizakalo zokutshala imali ku Malta ayinikezwanga kubantu abasebenzelana nezithombe zobulili ezingcolile eMalta.
Ukuhlala kwethu abameli eMalta awasekeli ukuhweba ngebhizinisi ngezinto zemithi eMalta.
“Isaziso Esibalulekile : IMM Solutions INC ithatha ukuqaphela okunengqondo ukucacisa imibhalo ye-AML yamakhasimende eMalta ne-KYC yabo kepha asemukeli noma imiphi imithwalo yemfanelo yanoma ikuphi ukwenqatshwa yiziphathimandla eMalta ukuze kuvunyelwe isicelo Indawo yokuhlala ngokutshalwa kwemali eMalta.
Ukuhlala kabusha ngokutshalwa kwezimali eMalta nakwamanye amazwe, kanye nezinye izinto eziningi ezisekelwayo.
Sinikezela ngokuhlala okuhle kakhulu ngokuxhaswa kokutshalwa kwezimali eMalta ngokutshalwa kwezimali, ukuthuthela kwamanye amazwe kanye nokuhlelwa kwezindlu eMalta.
Isekelwa yi-Residency yamazwe omhlaba ngesipiliyoni sokutshala imali kanye nezimfuneko zezomthetho zaseMalta, sakha izixazululo ezinhle kakhulu.
Ukuhlala kwethu ngezinsizakalo zokutshala imali eMalta kunikela ngamanani ashibhile, ngenani lempumelelo elingafinyeleleka kahle eMalta.
Sithathe isipiliyoni seminyaka sokuhlala kabili eMalta sisekela amaklayenti nemindeni yawo eMalta.
Ukuhlala kabusha Okuhlangenwe nakho ngabaceli bokutshalwa kwezimali eMalta kanye nabameli bezomthetho eMalta abahlinzeka ukwesekwa kumakhasimende.
Ngaphambi kokuhlala kwakho eMalta nangemva kokuvunywa, ilungu leqembu lethu eliphakeme lizoba khona ngebhizinisi noma ukwesekwa komuntu siqu eMalta
Sinokuhlangenwe nakho kwamazwe omhlaba ku-Residency ngokutshala imali kufaka phakathi iMalta, sisiza amaklayenti avela kuwo wonke umhlaba ngezinsizakalo ezihamba phambili.
Uma kwenzeka, ukuhlala kwakho ngokutshala imali eMalta kwehluleka, kunamanye amazwe angama-36 esiwahlinzekayo, sikulungele ngohlelo B.
Bala izindleko zokuhlala kabusha ngokutshala imali ukuya eMalta
Ukubala izindleko zokuhlala kabusha ngokutshala imali eMalta sicela ugcwalise yonke imininingwane kufaka phakathi amalungu omndeni kanye neminyaka yabo. Ngenxa yenani elikhulu lamakhasimende eMalta, siyakwazi ukuhlinzeka ngezinsizakalo ezingcono ngezindleko eziphansi. Izibalo zizofaka phakathi izindleko zokuhlala kabusha ngohlelo lokutshala imali lweMalta nezinye izindleko.
Ukuhlala kabusha ngokutshalwa kwezimali eMalta nakwezinye izinsizakalo
Ngaphandle kwe-Residency ngokubonisana ngokutshalwa kwezimali eMalta, sihlinzeka ngamabhizinisi, i-IT kanye nezinsizakalo ze-HR eMalta, ongayitholi ngaphansi kwesambulela esisodwa esinikezwe abanye abaxhumanisi beMalta abasenza isitolo esisodwa eMalta nakwamanye amazwe we-106.
Sisekela indlela yamakhasimende ethu edlula i-Residency ngokutshala imali iMalta ngosizo lwabameli bethu, ababonisi kanye nababoshiwe eMalta nakwamanye amazwe.
Ngemuva kokuhlala kabusha ngokutshala imali ukuze IMalta uma uhlela qala ibhizinisi ngokuthenga ibhizinisi elivele likhona eMalta ukuqala ngokushesha eMalta.
Ngemuva kokuhlala kabusha ngokutshala imali eMalta, isethaphu ibhizinisi ku Malta.
Abameli Bokuhlala Ngokutshalwa Kwezimali eMalta
Sihlinzeka ngokuhlala ngokusemthethweni ngokusetshenziswa kwezixazululo ze-Investment eMalta futhi impumelelo yamakhasimende ethu ibaluleke kakhulu, eMalta, singabaholi, inkampani yethu yabameli eMalta inezinhlaka ezihamba phambili zabokufika naseMalta, sinedumela lokuletha isipiliyoni sokuhlinzekwa kwamakhasimende okuhle kakhulu eMalta nge Sula izixazululo zamasu okutshala imali kubantu baseMalta kanye nemindeni yabo. Ukuhlala kwethu ngethimba lokutshala imali eMalta kunikeza izixazululo ezenziwe ngobuqili zempumelelo yeKlayenti.
Amandla wommeli weMalta ayadingeka kuzo zonke izenzo zomthetho ezenzelwe wena yi-Residency ngabameli bezokutshalwa kwezimali eMalta. Uma useMalta noma uhlela ukuvakashela iMalta, singathola amandla akho ommeli lapha.
Imibuzo Ebuzwa Njalo - Ukuhlala Ngokutshalwa Kwezimali eMalta
Yiluphi utshalomali oluncane lwe-Residency ngokutshalwa kwemali eMalta?
Ukutshalwa kwemali okuncane kwe-Residency ngokutshala imali eMalta yi-EUR 290,000.
Ngabe unikeza ukusekelwa okungokomthetho kweMalta ye-Residency ngokutshala imali?
Yebo, ummeli wethu eMalta nama-ejenti eMalta ahlinzeka ngokusekelwa kwe-Residency ngokutshala imali eMalta.
Ngabe ukuhlala kabusha ngokutshala imali kuya eMalta kuyabiza?
Izindleko Zokuhlala Ngokutshalwa Kwezimali eMalta kanye Nokuhlala kabusha ngezidingo zesikhwama sokutshala imali eMalta ngezabantu abaphezulu, sibiza imali yokubonisana kuphela ngeResidency by Investment to Malta, siphinde sinikeze nezinye izesekeli eziningi ze-Residency ngezixazululo ze-Investment.
Yiziphi izakhamizi zezwe ezingafaka isicelo sokuhlala kabusha ngokutshala imali eMalta noma nge-visa yabatshalizimali eMalta?
Ukuhlala kabusha ngezinsizakalo zokutshala imali kungasetshenziswa izakhamizi zanoma yiliphi izwe kepha zimbalwa izibonelo zokuhlala kabusha ngokutshala imali eMalta kusuka e-Asia, Residency by investment to Malta from Africa, Residency by invest to Malta from Europe, Residency by invest to Malta from South America, Ukuhlala kabusha ngokutshalwa kwemali eMalta kusuka eMalaysia, ukuhlala kabusha ngokutshalwa kwemali eMalta kusuka eBangladesh, ukuhlala kabusha ngokutshalwa kwemali eMalta kusuka e-Indonesia, ukuhlala kabusha ngokutshalwa kwemali eMalta kusuka eSri Lanka, ukuhlala kabusha ngokutshalwa kwezimali eMalta kusuka eNepal, ukuhlala kabusha ngokutshalwa kwemali eMalta kusuka eNdiya naseResidency ngokutshalwa kwemali eMalta kusuka e-UAE.
Ukuhlala Ochwepheshe Ngesiqondiso Sokutshalwa Kwezimali okweMalta
Cela ukubonisana kwamahhala kokuhlala kwakho ngokutshala imali eMalta
Amagama abalulekile ku-Residency by Investment for Malta